Glossy mira homwe
Hwindo mira homwe
Matte mira homwe
Kraft bepa homwe
Brown bepa foil homwe
Paper hwindo homwe
White bepa foil homwe
Flat Bottom homwe
Side Gusset homwe
Three Side Seal homwe
Child Uchapupu homwe
Aluminum foil homwe
Plastic zipi homwe
Plastic kavha homwe
A nzira shoma kraft paper back
by pamusoro 19-04-25
Uri kusarudza pasuru mumasaga kuti zvinhu zvenyu? Zvichida unogona kufunga kraft bepa kavha mabhegi, kraft paper back kuzvipira Simbiso aizivikanwawo muitiro bepa zipi mabhegi, ayo asiri chepfu, shata, isina, maererano National zvezvakatipoteredza mitemo, nesimba mukuru, mukuru Enviro .. .
Kunakisa sandara pasi mumasaga
Kazhinji, The kavha anoumbwa nevazhinji bhegi yave muupenyu hwedu kupinda zvinenge vakawanda mumusika kushandisa zvinoumba sandara pasi kavha mumasaga iri mudare. Saka ndezvipi zvakanakira iyoyi sandara pasi kavha muhomwe? We vachakuudza zvinotevera pamusoro sandara pasi packin ...
Three divi chisimbiso bhegi
Chii chinorehwa matatu kurutivi homwe, ndechokuti bhegi iri welded kumativi matatu. Rimwe divi richaramba akazaruka munguva kugadzirwa. Nenzira iyi, vatengi vanogona kuisa zvigadzirwa zvavo muhomwe, uye ipapo kushandisa kupisa chisimbiso chisimbiso pakuvhurwa muhomwe. Muzviitiko zvakawanda, Vacuum kavha runodikanwa-mativi matatu bhegi ...
Doypack Simukai homwe
Simukai homwe zvinowanzodavirwa kushandiswa muupenyu hwedu hwezuva nezuva. Tinogona kuona zvokudya zvakawanda sezvinoita kofi, nzungu, tudyo, nyama jery, mapuroteni simba, furawa rakazara nevanhu mira homwe pamwe zipi. Saka nhasi, tinonyora ino wekutaura kumira homwe. isu kutanga kutaura mashoko. Chokutanga mhando ndiyo kraft mira BSN ...
divi gusset bhegi
Side gusset zvikwama kuwedzera kukurumbira nokuti mafomu zhinji kuyambuka-siyana maindasitiri. rakasimba zvinhu zvavo kunobatsira kuwedzera pasherefu upenyu kuona chigadzirwa anoramba zvakachengeteka chisimbiso uye kudzivirirwa. divi gusset yedu mumasaga vari rinonyanya kushandiswa kavha nezvikafu zvishoma uye zvokudya yaoma zvakadai nzungu, ...
Coffee bhinzi vanowanzochema zvinobata muupenyu hwezuva nezuva. Vanhu vanoda kunwa kofi kana kushanda vanhu vakaneta, chaiyo vanobva kumadokero Country. homwe Coffee inoshandiswa kuchengeta kofi bhinzi yakareba. Nhasi, isu achasuma kofi bhinzi kavha. First chinhu, tinotaura mashoko. Pane vaviri hama ...
Adress: Room 266, 2nd Floor, QingShuiWan, No. 7-1 TangKeng Road; LongGang, Air, 518115, China
Clear Plastic Tsigira Pouches , Tsigira Plastic homwe Packaging , Tsigira homwe Packaging , Kraft Paper Resealable Bags , Clear Tsigira Pouches , Tsigira homwe Bags ,